News | wife
News | Tag: wife
पतिले धोका दिए पनि पतिलाई छोड्न सक्दैनन् श्रीमतीहरु !
'जेठी श्रीमतीका कारण म धेरै पटक रोएको छु'
बलिउड–बलिउड अभिनेता सैफ अली खानले सन् २००५ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा भाइरल भएको थियाे । यस भिडियोमा उनले आफ्नी पुर्व श्रीमतीसँगको सम्बन्धबारे बोलेका थिए । सैफले आफ्नो पिडा पोख्दै उनले भनेका थिए,‘मलाई किन बारम्बार मेरो औकात देखाउन खोजिन्छ । असोभनिय व्यवहार देखि अपशब्दले भरिएका गालीहरु मैले सबै सहेको छु । अब भने म ठीक महसुस गर्दैछु ।’
श्रीमतीको हत्या गर्न श्रीमानले १० लाखको सुपारी दिएको रहस्य बाहिर आएपछि...
पोखरा । पोखरा १० रामबजारमा बस्दै आएका एक युवाले श्रीमतीको हत्या गर्न १० लाखको सुपारी दिएको रहस्य खुलेको छ ।
श्रीमती रिसाएर हैरान पर्नुभएको छ ? यसो गर्नुहोस्
भनाइ नै छ बिनाश काले विपरित बुद्धि...रिसाएको बेलामा केही यस्तै अवस्था हुन्छ । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ ।